Global POS & GOLD – Global POS & GOLD
Global POS ဆိုတာဘာလဲ ?
Global POS သည် လက်လီလက်ကား အရောင်းဆိုင်များနှင့် Company များ၏ အရောင်းအဝယ်စာရင်းများ ၊ အကြွေးစာရင်းများ နှင့် ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်စာရင်းများကို ပိုမိုတိကျပြီး အမြန်ဆုံး နှင့် အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်သော Point Of Sales System တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
Global POS ကို ဘာကြောင့်အသုံးပြုသင့်တာလဲ ?
၁၀ နှစ်ကျော်သက်တမ်းရှိသော နည်းပညာ Company တစ်ခု ဖြစ်သည့်အပြင် Customers များအတွက် အမှန်တကယ် အသုံးဝင်နိုင်မည့် လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် နည်းပညာများကိုသာ အဓိကဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း ၊ ကျွမ်းကျင်သော Service Technician များမှ Training ပိုင်း နှင့် Customer Service ပိုင်းကို အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်းတို့ အတွက်ကြောင့် GlobalPOS ကို သင့်လုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုဖို့ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
Basic Point of Sales System
Global POS ကို အသုံးပြုနိုင်သော လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ
လက်လီ လက်ကား အရောင်းဆိုင်များ
Mini Mart နှင့် လူသုံးကုန်ပစ္စည်းဆိုင်များ
ဆေးဆိုင် နှင့် ဆေးခန်း များ
Bakery နှင့် မုန့်ဆိုင်များ
Coffee, Bars နှင့် Restaurants များ
Computer နှင့် Service လုပ်ငန်းများ
ဖုန်း နှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်များ
Fashion နှင့် အကျီဆိုင်များ
Spa နှင့် Beauty Saloon များ
Gold, Platinum, Diamond နှင့် Jewellery ဆိုင်များအတွက် အသုံးပြုနိုင်မည့် Global Gold Software ကို ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည် . . .
ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူခြင်း ၊ ရောင်းချခြင်း ၊ Return ပြန်ခြင်း ၊ အကြွေးပြန်ဆပ်ခြင်း တို့အပြင် FOC ၊ Item Discount ၊ Voucher Discount ၊ Tax စသည့် လုပ်ဆောင်မှုပေါင်းများစွာ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများကို Opening ၊ Damage ၊ Lost ၊ Adjustment တို့အပြင် Transfer In/ Out တို့ကိုပါ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လက်ကျန်များကို Unit Composition အလိုက်အလွယ်တကူ ထိန်းချုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
အရောင်းစာရင်း ၊ အဝယ်စာရင်းများကို နေ့အလိုက် ၊ လအလိုက် ၊ နှစ်အလိုက် ကြည့်ရှု့နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်စာရင်း ၊ အရှုံးအမြတ်စာရင်းအပြင် တခြား Reports ပေါင်းများစွာ ပါဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းများကို သက်ဆိုင်ရာ Unit ပုံစံမျိုးစုံဖြင့် သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
Customer အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး ရောင်းဈေးများကို ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း။
ကုန်ကြမ်းများကိုအသုံးပြုပြီး ကုန်ပစ္စည်းလက်ကျန်များကို အသေးစိတ်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်စနစ်။
ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် Barcode Labels များကို Software မှတိုက်ရိုက်ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း။
Delivery Team များသတ်မှတ်ပြီး Delivery Charges များကို သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း။
ကုန်ပစ္စည်းများကို ကာလာအလိုက် ၊ size အလိုက် စသည့် Attribute ပေါင်းများစွာဖြင့် လွယ်ကူစွာထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း။
User Level များခွဲခြားပြီး လုပ်ဆောင်ခွင့်များအား ထိန်းချုပ်သတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်း။
Cash အပြင် Bank Payment နှင့် Other Payment ပုံစံများဖြင့် ငွေပေးချေခြင်းများကိုလည်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်ခြင်း။
Local Network ဖြင့်ချိတ်ဆက်ပြီး Tablet များဖြင့် Pending ဘောင်ချာထည့်သွင်းခြင်း ၊ Print ထုတ်ယူခြင်းနှင့် အရောင်းဘောင်ချာဖွင့်ခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း။
Linked With Third-Party Applications
SAP , QuickBooks စသည့် Accounting Software, CRM, ERP Software တို့နှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
GMRpos ဆိုတာ လက်လီလက်ကား အရောင်းဆိုင် ပိုင်ရှင်များအနေဖြင့် မိမိတို့အရောင်းဆိုင်များရဲ့ စာရင်းများကို Mobile ကနေတဆင့် ကြည့်ရှု့နိုင်မယ့် Application တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
pos.marketing@globalwave.com.mm +95 9964560680 +95 9964560066
pos.service@globalwave.com.mm +95 9777111911 (Extension : 1016) +95 9964560690 (GlobalGold) +95 9977532812 (GlobalPOS)